Brexit ကမင်းရဲ့ငွေကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှာလဲ။ | စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး
ဟိုဆေး recio | | အကြပ်အတည်း
ထိုနေ့၌လက်ဝါးကပ်တိုင်ပါသောနေ့ရက်တစ်ရက်ရှိလျှင်လာမည့်ဇွန်လ ၂၃ ရက်၊ ဆန္ဒခံယူပွဲကိုအင်္ဂလန်ကဥရောပယူနီယံကနေထွက်ခွာသွားပြီလားဆိုတာကိုပြောလိမ့်မည်။, ကြောက် Brexit အတူ။ ထို့အပြင်သင်သည်နိုင်ငံရေးနှင့်လူမှုရေးသာမကစီးပွားရေးအတွက်ပါကျယ်ပြန့်သည့်အကျိုးဆက်များကိုခံစားရလိမ့်မည်။ အသေးစားနှင့်အလတ်စားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်၏အကျိုးစီးပွားကိုအညီအမျှထိခိုက်လိမ့်မည်။ ဗြိတိသျှနိုင်ငံသားတွေဆုံးဖြတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်သင်ဟာရှယ်ယာများနှင့်ပုံသေ ၀ င်ငွေများအတွက်ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်မှာငွေအမြောက်အများကို ၀ င်ငွေရစေနိုင်တယ်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှဥရောပယူနီယံမှထွက်ခွာရန်ဖြစ်နိုင်ချေကိုမီဒီယာတွင် Brexit ဟုလူသိများသောဖြစ်စဉ်တွင်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။ ၎င်း၏အရေးပါမှုသည်ဥရောပသားအားလုံးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်များ၏အကျိုးစီးပွားအမြောက်အများပါ ၀ င်လာသည့်နောက်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစုစုကိုဖွံ့ဖြိုးရန်လာမည့်သီတင်းပတ်များအတွင်းသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ အချည်းနှီးမဟုတ်ပါ ၎င်းကိုပြုလုပ်ရာတွင်သင်ဤအချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အလွန်အမင်းအကြံပြုလိုသည်.
ဒီဆန္ဒခံယူပွဲ၏မေးခွန်းနောက်ဆုံးတော့ရှိခဲ့သည့်ရလဒ်မှ ယူကေသည်ဥရောပသမဂ္ဂ၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သင့်သလား။, ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်တလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားသွားပါလိမ့်မယ်။ ရလဒ်ကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ဟာသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မှာပါ ၀ င်ပတ်သက်လိမ့်မယ်ဆိုတာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်း၏သတင်းမီဒီယာများမှနောက်ဆုံးထုတ်စစ်တမ်းများသည်ဥရောပပေါင်းစည်းမှုကိုထောက်ခံသူများအားအနည်းငယ်သာအကျိုးပြုသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Brexit ကိုကြောက်ရွံ့သောဥရောပရှယ်ယာစျေးကွက်များကအလွန်ကြိုဆိုကြသည်။
4 အရေးယူခြင်းအတွက်7အကြံပြုချက်များ
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကိုဥရောပယူနီယံ (Brexit) မှထွက်ခွာခြင်းသည်နိုင်ငံသားများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောကုန်ကျစရိတ်ရှိလိမ့်မည်ဟုစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (OECD) မှထုတ်ပြန်သောအစီရင်ခံစာအရဗြိတိသျှတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်ဤစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှထွက်ခွာသွားလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ ပေါင် ၂,၂၀၀ (ယူရို ၂,၈၀၀) ခန့်ကိုဆိုလိုသည်။ သို့သော်တိုက်ကြီးဟောင်း၏အခြားမြို့သားများကောအသို့နည်း။
လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအများစုကထိုသို့ထင်မြင်ကြသည် ဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေး၏ဆိုးကျိုးများ သင်၏အိတ်ကပ်များသည်၎င်းကိုသတိမပြုမိဘဲထိန်းချုပ်ထားပြီးအကျိုးဆက်များအနည်းငယ်သာရှိလိမ့်မည်။ အနည်းဆုံးတော့ရေတိုမှာတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး စတော့ဈေးကွက်သည်မတည်ငြိမ်သောလှုပ်ရှားမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်, စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်တွင်ပွင့်လင်းရာထူးများ၏အမြတ်အစွန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသော။ ဤဆောင်းပါး၌သင်တွေ့နိုင်သကဲ့သို့ intuit အများအပြားထက်ပိုသည်။
အကြောင်းပြချက်မှာအဓိကတိုက်ကြီးဟောင်း၏စီးပွားရေးများအကြားခိုင်မာသောဆက်နွယ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးအပေါ်မှီခိုမှုဆိုသည်မှာလာမည့်သီတင်းပတ်များ၌ဖြစ်ပေါ်လာမည့်လူကြိုက်များသောစီရင်ချက်၏ရလဒ်ပေါ် မူတည်၍ ဤဆုံးဖြတ်ချက်သည်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည်သင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသိရှိရန်သင့်အတွက်အဆင်ပြေလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်လာမည့်ဆန္ဒခံယူပွဲတွင်အင်္ဂလိပ်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လျှင်နွေရာသီနောက်ပိုင်းတွင်ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများသည်ထူးခြားသည်ထက်ပိုများသည်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆနိုင်မှုအရှိဆုံးမှာဥရောပရှယ်ယာဈေးကွက်များ၌ဖြစ်လိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်သူတို့၏ညွှန်းကိန်းအားလုံးတွင်သိသာစွာကျဆင်းသွားလိမ့်မည်။ နှင့်အတူ အဆိုပါအနိမ့်ပြန်သွားဖို့အများကြီးဖြစ်နိုင်ခြေ ကြောင်းဒီနှစ်အစမှာကစားခဲ့ကြသည်။
ဤအဖြစ်အပျက်နှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါစတော့ဈေးကွက်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုချန်လှပ်ရန်ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပေ။ အနည်းဆုံးလအနည်းငယ်အထိအလွန်လျင်မြန်သောလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး အနေနှင့်သင်၏အကျိုးစီးပွားကိုမည်သည့်နည်းဖြင့်မျှအကျိုးမပြုနိုင်ပါ။ နှင့်အညီ, စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်များတွင်ရာထူးယူပြီးခြင်းမရှိဘဲအနည်းဆုံးရှယ်ယာစျေးကွက်များအခြေချသည်အထိ။
ဒီအဖြစ်အပျက်အသစ်ရဲ့အခြေအနေမှာသင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းပေါ်လာတယ်။ ကောင်းပြီ၊ သင်စုဆောင်းငွေများကိုအမြတ်အစွန်းရရန်အခြားရွေးချယ်စရာများရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုများမှသင်ဖြစ်ရပ်များကိုကြိုတင်မျှော်လင့်ထားပါကအလွန်စိတ် ၀ င်စားနိုင်သည်။
Brexit မတိုင်မီသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဗျူဟာကိုအခြေခံလိမ့်မည် သူတို့ခိုလှုံရာအဖြစ်ကျင့်သုံးသောတန်ဖိုးများကိုရွေးချယ်ပါ။ ပထမ ဦး စွာသင်သည်သူတို့၏ချည်နှောင်ခြင်းမှတစ်ဆင့်ဂျာမနီနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့၏ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိလိမ့်မည်။ သင်ဤဘဏ္productsာရေးထုတ်ကုန်များတွင်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားစွာရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာကြီးမားသောရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ငွေကြေးစီးဆင်းမှုသည်ဤဘဏ္assetsာရေးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအားကောင်းသောနည်းဖြင့်ညွှန်ကြားထားခြင်းဖြစ်သည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါက၎င်းသည်သင်၏အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရန်ပထမဆုံး ဦး စားပေးဖြစ်လိမ့်မည်။
သငျသညျထူးချွန်တန်းတူခိုလှုံရာတန်ဖိုးကိုဖြစ်စေမေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းသည်ရွှေ မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်အရာမဆိုအင်္ဂလိပ်ဆန္ဒခံယူပွဲမှအဆိုပြုထားသောအခြေအနေမျိုးတွင်အကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။ အရာအားလုံးရှိလင့်ကစားရွှေသတ္တု၏ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုသည်ယခုနှစ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အပြည့်အဝကျေနပ်ဖွယ်ရှိပြီးစျေးကွက်နှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေး၏မတည်ငြိမ်မှုများကြောင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၃၀% ခန့်ပြန်လည်တန်ဖိုးရှိနေသည်။
တတိယအဆင့်အနေဖြင့်၎င်းတို့စျေးနှုန်းများပြန်လည်မြင့်တက်နေသည့်ကုန်ကြမ်းအချို့ကိုလည်းသင်စဉ်းစားနိုင်သည်။ သူတို့စပ်ကြားမှာ၊ တစ်စည်ဒေါ်လာ 50 ဒေါ်လာ၏အရေးကြီးသောအတားအဆီးရောက်ရှိဖို့လမ်းအပေါ်သောရေနံ။ အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါ၊ ပြီးခဲ့သည့်အစည်းအဝေးများအတွင်းတွင် ၂၀% ကျော်သောပြန်လည်ခန့်မှန်းချက်ကိုပြသခဲ့သည်။ ပြီးတော့ဒီဘဏ္assetာရေးပိုင်ဆိုင်မှုမှာရာထူးယူဖို့အကြံပေးတဲ့ဘဏ္financialာရေးလေ့လာသုံးသပ်သူနည်းနည်းတော့ရှိပါတယ်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်း၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်လုံးဝဂရိတ်ဗြိတိန်အတွက်လူကြိုက်များတိုင်ပင်ဆွေးနွေး၏ရလဒ်ဖြစ်လိမ့်မည်ကတည်းက။
ဤအရာအလုံးစုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေးချက်များ ဤအလောင်းအစားများကိုထိန်းသိမ်းထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ။ ငွေစုဆောင်းမှုကိုကာကွယ်ရန်ပိုမိုသင့်လျော်သောနည်းဖြင့်၊ ၎င်းသည်အခြားဘဏ္financialာရေးပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပေါင်းစပ်။ ပိုမိုရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအမျိုးမျိုးပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ယခု အချိန်မှစ၍ ဖွံ့ဖြိုးနိုင်သည့်ဤအခြေအနေတွင်သင်အသုံးပြုသင့်သည့်နည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အခြားဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမှာမဲပုံး၏ရလဒ်မှာနိုင်ငံသားများသည်ဥရောပသမဂ္ဂနှင့်ကျွန်းများဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာအရေးမကြီးပါ၊ ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်ကိုသိသိသာသာထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်လက်ရှိကုမ္ပဏီများ၏စျေးနှုန်းများကိုလျှော့ချမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါကလူကြိုက်များတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လျှင်, ဒါဟာရှယ်ယာစျေးကွက်များကအပြုသဘောကြိုဆိုလိမ့်မည်ဟုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည်ကုမ္ပဏီစျေးနှုန်းများအတွက်ကြီးမားသောပြန်လည်အကဲဖြတ်မှုများပင်အောင်မြင်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်နည်းပါးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးကုန်သွယ်ရေးအစီအစဉ်အနည်းငယ်ကိုသာဖုံးလွှမ်းသွားမည်ဖြစ်သော်လည်းလများမဟုတ်ပါ။ ထိုအယေဘုယျတိုး၏အဓိကအကျိုးခံစားခွင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်မှာဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ sector ။
နိုင်မလား ဤရွေ့ကားလှုပ်ရှားမှုများ၏အားသာချက်ယူစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲမှာရာထူးယူပါသတင်းကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ရန်တကယ့်ကိုရန်လိုသောစစ်ဆင်ရေးများမှပင်။ ဒါဟာသင်ဟာသန်းကြွယ်သူဌေးတစ် ဦး ဖြစ်လာဖို့မရည်ရွယ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့နောက်လာမယ့်နွေရာသီအားလပ်ရက်အတွက်ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်သူတို့ပေးဆပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလိမ့်မယ်။ နှစ် ဦး စလုံးအမျိုးသားစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်များနှင့်အခြားဥရောပစျေးကွက်မှ။ ဒီအခြေအနေမှာအများဆုံးထမြောက်လိမ့်မည်ဟုသူအင်္ဂလိပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေမယ့်။
လည်း အင်္ဂလိပ်ပုံသေ ၀ င်ငွေသည်ဤလှုပ်ရှားမှုများကိုအမြတ်အစွန်းဖြစ်စေနိုင်သည်, နှင့်ပိုမိုအောင်မြင်မှုနှင့်အတူငွေစုပိုကောင်းအောင်ရန်ရှိသည်အခြားနည်းလမ်းများအခြားဖြစ်လာသည်။ ဥရောပပြည်သူ့ကြွေးမြီမှရရှိသောကျန်ရှိသည့်ထုတ်ကုန်များကိုဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များ၌သူတို့၏ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတွင်ချန်ထားခဲ့မည်မဟုတ်ပေ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ယခုဆန္ဒခံယူပွဲသည်သင်၏လက်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစုစုကိုအသစ်ပြောင်းရန်နှင့်ပေါ်ထွက်လာနိုင်သည့်မြင်ကွင်းသစ်ပေါ် မူတည်၍ ပြင်ဆင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဗြိတိန်သည်အီးယူအတွင်းဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဆိုလျှင်သင်ငွေများသိုလှောင်ထားနိုင်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းကောင်းကိုမျှော်လင့်စရာမရှိပါ။ Brexit ထက် ကျော်လွန်၍ မည်သည့်အရာကမဆိုအလွန်တိကျသောနည်းနှင့်ဆက်လက်ကြီးစွာသောဖြစ်နိုင်ခြေများမရှိဘဲ။ စျေးကွက်ကိုခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိနေဆဲဖြစ်သောအခြားပြproblemsနာများလည်းရှိနေသေးသည် အဟောင်းတိုက်ကြီးရှိစီးပွားရေး၏နှေးကွေး.
အရေးယူခြင်းအတွက်7အကြံပြုချက်များ
Brexit နှင့် ပတ်သက်၍ သင်တီထွင်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာမှာသင်၏လှုပ်ရှားမှုများကိုသတိရှိရှိလုပ်ဆောင်ရန်နှင့်အခြားထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများမှငွေစုကိုထိန်းသိမ်းထားရန်ဖြစ်သည်။ ဤအချိန်သည်ကြီးမားသောအမြတ်အစွန်းများရရှိရန်အချိန်ကောင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ယခုအချိန်အထိအောင်မြင်မှုများကိုထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသင်ဤအချိန်တွင်အလွန်အသုံး ၀ င်သောအကြံပြုချက်များမှတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
ဤသည်နေ့ရက်ကာလ၌အလွန်ရန်လိုစစ်ဆင်ရေးထွက်သယ်ဆောင်ရန်မကြိုးစားပါနဲ့ စျေးကွက်များတွင်။ ဒီလူကြိုက်များတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာသည့်မေးခွန်းများကိုရှင်းလင်းလျှင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မည်။ နောက်ပြီးနောက်မှာ၊ သင်သည် equity သို့မဟုတ်အခြားဘဏ္assetsာရေးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရွေးချယ်ရန်အတွက်အချိန်များများရှိလိမ့်မည်။
ဒါဟာဖျော်ဖြေဖို့အကောင်းဆုံးစံပြအချိန်ဖြစ်လိမ့်မည် သင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစုစုအတွက်ချိန်ညှိစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်တွင်ဖြစ်စေ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေမှဖြစ်စေသင်၏ရာထူးနေရာ၌ရှိသည်။ ဖြစ်ရပ်များ၏အဖြစ်မှန်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သင်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်မှာသေချာသည်။
သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အခြေအနေများရှိပါက ခုခံကာကွယ်ဝယ်ယူမှုများအတွက်ရွေးချယ်ခြင်းသံသယမရှိဘဲလက်ရှိတစ်ခုသည်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချည်းနှီးမဟုတ်ပါကသင်သည်ဤထူးခြားချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုထက်မကကိုရှာဖွေနိုင်ပြီးသင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးချနိုင်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
လာမယ့်အားလပ်ရက်၏ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်, သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ်အနည်းငယ်အနားယူရန်အချိန်ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်ရက်သတ္တပတ်များကုန်လွန်သွားသည်နှင့်မြင်ကွင်းကိုရှင်းလင်းရန်စောင့်ပါ။ သင်၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက်သင်ပိုမိုအင်အားနှင့်အတူပြန်လာလိမ့်မည်
သူကမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုစုဆောင်းမှုကိုအမြတ်အစွန်းရနိုင်ပြီး၊ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများအမြဲရှိနေပါသည်တောင်မှအများဆုံးရှုံးသောအခါအခြေအနေတွေထဲမှာ။ သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာကိုသာရှာဖွေရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
သင်လုပ်နိုင်သည် ဆန္ဒခံယူပွဲရလဒ်မျှော်လင့် လှုပ်ရှားမှုများကိုပိုမိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချရန်နှင့်စတော့ဈေးကွက်တွင်အသုံးဝင်သောဟောင်းနွမ်းသောဟောင်းနွမ်းမှုများကိုအသုံးပြုရန် "ကောလာဟလများနှင့် ၀ ယ်ယူပြီးသတင်းနှင့်ရောင်းရန်" ဖြစ်သည်။
သင့်အနေဖြင့်ယခုနှစ်အတွင်းသင်မလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အရာများအားသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင် ၀ င်ရောက်ရန်မကြိုးစားပါနှင့်၊ ဤရန်လိုသောမဟာဗျူဟာကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်မှာအလျင်မြန်ဆုံးအချိန်မဟုတ်ပါ။ နောက်မှသင်၌အခွင့်အလမ်းများစွာရှိလိမ့်မည်, သံသယတစ်ခုမှမရှိဘဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး » အထွေထွေစီးပွားရေး » အကြပ်အတည်း » Brexit ကမင်းရဲ့ငွေကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှာလဲ။
ဟိုဆေး recio ဟုသူကပြောသည်
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဟုတ်ကဲ့, ဒါပေမယ့်အခြားအချက်များရှိပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Jose recio အားပြန်ပြောပါ